सुत्ने कोठामा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस् - eSuccess Quotes
3 months ago 956 Views
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ
वास्तशास्त्र प्राचीन विज्ञान हो । वास्तुको अर्थ हुन्छ आवासगृह अर्थात् घर र शास्त्रको अर्थ हुन्छ अनुशासन र निर्देश । यसर्थ वास्तुशास्त्र भन्नाले घर वा कुनै संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्देशलाई बुझिन्छ । वास्तुशास्त्रलाई हिन्दु शास्त्र र आधुनिक विज्ञानले पनि विश्वासिलो आधार मान्ने गर्छ । वास्तुशास्त्रलाई आधुनिक समयको विज्ञान र आर्किटेक्चरको प्राचीन स्वरुप मान्न सकिन्छ ।
दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागी धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । जसमध्ये सुत्ने कोठा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुत्ने कोठमा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस् । यी गल्तीले त्यस कोठामा सुत्ने मानिसहरु वीच अविश्वास पैदा गरिदिन्छन् । वास्तुशास्त्र अनुसार सुत्ने
कोठामा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस् ।
१. घरमा आएका पाहुनाहरुलाई अतिथी गृह वा ड्राईङ रुममा नै राख्नुपर्छ । सबै मानिसहरुलाई आफ्नो सुत्ने कोठमा ल्याउनु राम्रो हुदैन । यदि अरुलाई आफ्नो बेडमा सुताउनु भयो भने बेडबाट नेगेटीभ ईनर्जी आउँछ जसबाट पति पत्नीमा फाटो आउँछ ।
२. प्राय: मनिसहरुलाई आफ्नै कोठामा वास बेसीन लगाउन मनपर्छ । तर यस्तो गर्नाले पति पत्नी वीच विश्वास कम हुदै जाछ । यदि तपाईको कोठामा पनि वास बेसीन खुला छ भने त्यसलाई पर्दाले छोप्नुहोस् ।
३. सुत्ने कोठामा बेड देखिने गरि सिसा नलगाउनुहोस् । यस्तो गर्नु निकै नराम्रो मानिन्छ । जसले गर्दा पति पत्नी वीचको शान्ती भंग हुन्छ ।
४. सुत्ने कोठामा कहिल्यै पनि काडेदार विरुवा वा फूलहरु नराख्नुहोस् । यदि राख्ने चाहना छ भने दुई वटा गमला र त्यसमा सुन्दर फूलहरु राख्नुहोस् ।
६. बिजुलीका उपकारणहरु कहिल्यै पनि बेडमुनी राख्नुहुदैन । यी सामानहरु बेडमुनी राख्नाले त्यो बेडमा सुत्नेहरुको झगडा भईरहन्छ ।
दूधमा बेसार मिसाएर पिउनुको चमत्कारी फाईदै फाईदा, कसरी र कहिले पिउने ?
आयुर्वेदले बेसारलाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । चिकित्सा विज्ञानले पनि यसलाई भिटामिन र खनिजको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन्छ ।
बेसारमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी, भिटामिन ए, क्याल्सियम, फस्फोरस, फलामलगायत तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । बेसारलाई तरकारीमा मसालाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । दूधमा बेसार मिलाएर खाँदा रुघाखोकी सन्चो हुन्छ । महसँग मिसाएर खाएमा टन्सिल निको हुन्छ ।
एलर्जी, दाद, लुतो आदि छालासम्बन्धी रोगका लागि बेसार प्रभावकारी हुन्छ । बेसारको चूर्ण गहतमा मिसाएर लेप बनाई लगाउँदा छालासम्बन्धी विभिन्न समस्या निको हुन्छन् । मुख र घाँटीमा घाउ आउँदा बेसारपानीले कुल्ला गर्दा आराम मिल्छ ।
पेटमा ग्यास जम्मा हुने, कफ जम्ने, खुट्टा बटारिनेजस्ता समस्यामा बेसारलाई नुनपानीमा घोलेर बिहान–बेलुका खाएमा ठीक हुन्छ । दैनिक अमलाको रसमा बेसार मिसाई सेवन गर्दा मधुमेहका रोगीलाई लाभ मिल्छ । बिच्छी, बारुला, अरिंगाल आदिले चिलेमा सो ठाउँमा काँचो बेसारको लेप लगाउँदा आराम मिल्छ ।
बेसार छालाका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसर्थ, हिजोआज बेसार सौन्दर्य प्रसाधनका लागि समेत प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले छालामा चमक ल्याउन मद्दत गर्छ । मर्किएको, सुन्निएको वा चोट लागेको ठाउँमा घिउकुमारीको रससँग बेसार मिसाएर लगाएमा दुखाइ कम हुन्छ ।
दूधमा बेसार मिसाएर पिउनुको यी चमत्कारी फाइदा
बेसार शुद्ध र मिसावट नभएको हुनुपर्छ । साथै, दुध पनि ताजा र जैविक हुनुपर्छ । सकेसम्म प्याकेटको दुध पिउनुहुन्न । दुध उमालेपछि तर निकाल्नु पर्छ । त्यसमा एक चिया चम्चा बेसार मिसाएर पिउन सकिन्छ । दुधलाई तातो अवस्थामा पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
कुनैपनि खानेकुरा कुन समय खाने भन्ने कुराले पनि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । जस्तो दही स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो तर, राती सुत्नुअघि दहीको सेवन प्रत्युत्पादक हुन्छ । ठीक यसैगरी दुधको सेवन चाहि राती सुत्नुअघि गर्न सकिन्छ । बेसार मिश्रण गरिएको दुध राती पिउनु लाभदायक मानिन्छ ।
दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा त्यसले प्राकृतिक तरिकाले कलेजोको बिषाक्त पदार्थ निकाल्छ । यसैले गर्दा रगत शुद्धिकरण पनि हुन्छ ।
बेसार र दुधको मिश्रणमा क्याल्सियम बढी हुन्छ । दैनिक यस्तो दुध पिउनाले हड्डी बलियो बनाउँछ ।
बेसारमा करक्यूमिन रहेको हुन्छ । यसले क्यान्सरको कोसिका रोक्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले दुध र बेसार पिउदा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने बेसार र दुध पिउनु लाभदायक हुन्छ । बेसार मिसाइएको दुधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निन्द्रा लगाउँछ ।
दुध र बेसार यस्तो शक्तिशाली एन्टी सेप्टिक हुन्छ, जसले पेटको अल्सरलाई समेत ठीक गर्छ । यसले पाचनलाई राम्रो बनाउँछ । अल्सर, डाइरिया र अपच हुन दिदैन ।
बेसार भएको दुध पिउदा महिनावरीको क्रममा हुने दुखाई पनि कम गर्छ ।
बेसार पानी खानुका यी १० अमूल्य फाइदा
बेसारमा प्राकृतिकरुपमै एन्टीइन्फ्लेमेटोरी तथा एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा प्रचुर रहनछ । यी तत्वले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्दछ । बेसारमा हुने करक्यूमिन नामक तत्व शत्तिशाी एन्टीअक्सिडेन्ट हो जसले कोशिकाहरु नष्ट हुनबाट जोगाउँदछ र शरीरमा कोशिका निर्माण तीव्र बनाउँदछ । जानौं यी बाहेक अन्य यसका फाइदाहरु :
१.दिमाग तीक्ष्ण बनाउँछ : हल्का मनतातो पानी र बेसार विहानको समयमा पिउने हो भने यसले हाम्रो दिमागको तीक्ष्णता विकास गर्दछ र अधिक क्रियाशील बनाउँछ ।
२. जलन कम गर्छ : यदि शरीरमा सुनिने र जलन हुने समस्या छ भने बेसार पानी पिउनुस् । यसमा हुने कुर्कुमिन तत्वले सुनिने, जलन हुने तथा जार्नीको दुखाई हुने समस्याबाट मुक्त गर्दछ । यी समस्याका लागि बेसार पानी अचूक मानिन्छ ।
३.मृगौला क्रिया चुस्त बनाउँदछ : बेसार पानीको प्रयोगले मृगौलाको क्रियाकलापलाई चुस्त राख्दछ । यी रोगीका लागि औषधीभन्दा कम छैन बेसार पानी । यसले मृगौलामा भएको खराब कोषहरु नष्ट गरी मृगौलाको कार्यसञ्चालन चुस्त बनाउँदछ र संक्रमण हुनबाट रोक्छ ।
४.हृदयको समस्यामा फाइदाजनक : हृदय समस्याका विरामीले बेसार पानी पिउन जरुरी छ । यसले रगतलाई बाक्लो हुन बचाउँदछ । जसकारण हृदयघातकको जोखिमलाई न्यून गर्दछ ।
५.सुन्दरता बढाउँदछ : बेसार पानीमा कागती र मह मिलाएर पिउने हो भने शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थहरु शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । यसरी पानी पिउँदा शरीरमा कोष ताजा भइराख्छ र उमेरको प्रभाव बढ्न दिँदैन । बेसारमा हुने स्वतन्त्र रेडिकल्सहरुले सुन्दरतालाई बढावा दिन्छ ।
६.पाचन राम्रो बनाउँछ : बेसार पानीले पाचनप्रक्रिया सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । यसमा हुने एन्टी एक्सीडेन्ट र एन्टी इन्फ्लेमेटरीतत्वले पाचन राम्रो बनाउँदछ र ग्याँस हुन दिंदैन ।
७.प्रतिरक्षा विकास गर्दछ : मनतातो बेसार पानीले शरीरमा प्रतिरक्षा क्षमता विकास गरी रुघाखोकी जस्ता सामान्य रोगहरु तत्काल निको पार्दछ । यतिमात्र नभई यसले विभिन्न किसिमका क्यास्रका रोगको सम्भावनालाई न्यून गरी क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ ।
८.मोटोपन घटाउँछ : बसोरको सेवनले मोटोपनमा पनि राहत पाउन सकिन्छ । यसमा हुने करक्यूमिन तत्व शरीरमा घुलेर चिल्लोपदार्थ विकास गर्ने तत्वहरु बन्नबाट रोक्दछ ।
९.दुखाईमा राहत : बेसार शरीरमा हुने दुखाई कम गर्न एकदमै उपयुक्त मानिन्छ । हड्डी टुटेमा, मर्किएमा तथा अन्य चोटपटकमा फाइदाजनक हुन्छ । यसका निम्ति दुध र बेसार मिलाएर पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । यसले शरीरमा एलडीएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम गर्छ जुन हृदयसम्बन्धीका रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
१०.बढ्दो उमेरको असर कम गर्छ : बेसारको दैनिक प्रयोगले उमेरको असरलाई कम गर्दछ । दुधमा मिलाएर पिउनु छालाका लागि राम्रो मानिन्छ ।
राति सुत्नुभन्दा पहिला बेसारसहित दुध खानु
काँचो बेसार र दुध मतलब बेसारयुक्त दुध , यो ‘टर्मरिक लाटे’ नामले पनि निकै प्रचलित पनि छ । बेसारयुक्त दुध पिउनाले थुप्रै फाइदा हुने गर्दछ । निन्द्रा राम्रो लाग्नुको साथै रोग प्रतिरक्षात्मक शक्ति पनि बढाउछ र स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । यसमा सहि मात्रामा बेसारको प्रयोग हुनुपर्दछ , राम्रो संग उपयोग गर्न जान्यो भने मात्र बेसारको जादु चल्दछ ।
सहि मात्रामा सेवन नगर्दा बेसारले शरीरलाई नकारात्मक असर पनि पर्ने हुन्छ । बेसारयुक्त दुध कतिपय रोगको लागि नराम्रो पनि हुन सक्छ । शारिर सुन्निएको घटाउन, इम्यूनिटी बढाउन , मुटु रोग र डायबिटीजसंग लड्नको लागि पनि सहयोग गर्छ ।
बेसारयुक्त दुधका फाइदाहरु:
बेसरमा भरपुर मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, यो करक्यूमिन एन्टीअक्सिडेन्ट गुणले भरिएको हुन्छ । एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरलाई हानि हुनबाट बचाउने काम गर्दछ । बेसारमा भएको गुणले काम गर्नको लागि, बेसरको सहि अनुपात र पिउने समयमा ध्यान दिनुपर्छ । बेसरलाई सहि मात्रामा सेवन गर्नुपर्दछ, कम वा अधिक भयो भने स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
बेसार धेरै सेवन गर्दा पेट पोल्ने, भारीपन अनुभव हुने र शारिरमा हुने आइरनको स्तरलाई पनि बिगार्ने काम गर्दछ, त्यसैले बेसारलाई पूर्णप्राकृतिक रुपमा सेवन गर्नुपर्छ । बिहान खाली पेटमा पानीसंग करक्यूमिनको गोली खादैमा या आफ्नो आहारमा जथाभावी मात्रामा बेसार मिलाउदा यसले फाइदा गर्दैन ।
बेसार युक्त दुध शारीरिक चोटपटकलाई छिट्टै निको हुन सहयोग गर्छ । निन्द्रा राम्रो संग नलाग्ने तथा सुत्न समस्या हुने व्यक्तिलाई राति सुत्ने समयमा एक कप बेसारयुक्त दुध पिउदा फाइदा हुन्छ । यसले आरामदायी निन्द्रा प्रदान गर्छ ।
बेसारले शारिरको प्रतिरक्षा बढाउने काम गर्छ जसले गर्दा रुघा, खोकी वा फ्लु जस्तो मौसम परिवर्तनको कारणले हुने बिरामीबाट बचाउन सहयोग गर्छ । रति सुत्नु भन्दा पहिले बेसर दुध पिउँदा शारिरको हर्मोनल सन्तुलनमा सुधार हुन्छ जसले गर्दा अनुहारको छालाको समस्या कम हुन्छ ।
शरीरको तौल घटाउन, छालाको समस्या हटाउन साथै मधुमेहको बिरामीको लागि पनि बेसारको चियाले फाइदा गर्छ ।
कसरी बनाउने बेसार युक्त दुध :
एक कप दुधलाई राम्रो संग उभाल्ने र स्वादको लागि एक चिम्टी बेसार र थोरै चिनी वा सख्खर मिसाउने र सुत्नुभन्दा केहि क्षण अगाडी यसलाई तातोतातो पिउने ।
यदि मधुमेह, मुटु रोग वा हाडको जोर्नीको समस्या छ भने त्यसमा सानो टुक्रा जाइफल पनि मिसाउदा हुन्छ । थायरोइडको समस्या छ भने काजु मिसाउने र राति निन्द्रामा एठनको समस्या हुन्छ भने पनि यसले सहयोग गर्छ ।
शरीरमा उर्जा कम भएको अनुभव हुन्छ र आफ्नो त्वचामा पनि समस्या छ भने यसले सहयोग गर्छ । दुधमा बेसार संगै कालो मरिच राखेर पिउदा घाँटीमा संक्रमण भएको पनि निको हुन्छ ।
यदि ल्याक्टोज इनटोलरेन्सको समस्या छ भने बोटमिल्क वा बेसारलाई बेलुकाको समयमा नरिवल वा सख्खरसंग पनि सेवन गर्न मिल्छ ।
खानामा बेसारको प्रयोग किन गरिन्छ ?
बेसार जो कोहीको भान्सामा हुन्छ। तरकारी, दाल, मासुलगायत जुनसुकै परिकारमा बेसारको प्रयोग अनिवार्य गर्ने चलन छ। बेसारलाई मसलाको रुपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ। फाइदा थाहा नहुँदा पनि यसको प्रयोग पुस्तौंदेखि हुँदै आएको छ।
पूर्वीय मुलुकमा खानाको स्वाद बढाउन र परिकार आकर्षक देखाउन बेसारको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि भइरहेको छ। अन्जान तरिकाले बेसारको प्रयोग भइरहे पनि यसले शरीरलाई अनेक फाइदा दिइरहेको छ। परिकारमा मिसाइएको बेसारले खाना पचाउन पनि मद्दत गर्छ। यसमा प्राकृतिक रुपमा औषधिय गुण हुन्छ।
पछिल्लो समय विभिन्न अध्ययनले बेसारको फाइदाबारे निष्कर्ष निकालेपछि संसारभर यसको प्रयोग बढेको छ। पूर्वीय मुलुकहरूमा यसअघि खानामा मात्रै प्रयोग गरिने बेसार अहिले दूध, पानी, महलगायतसँग मिलाएर पनि सेवन गर्न थालिएको छ।
बेसारले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै इन्फेक्सनबाट बचाउँछ। यसमा शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी, भिटामिन ए, क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरनलगायत तत्व पाइन्छ।
बेसारलाई ‘नेचुलर पेन किलर’को रुपमा पनि चिनिन्छ किनकि यसले शरीरमा हुने दुखाइलाई निदान गर्छ। त्यसैकारण गाउँघरमा पहिल्यैदेखि काटेको, पोलेको चोटपटक लागेको ठाउँमा बेसारको प्रयोग गरिंदै आएको हो।
मांसपेशीमा हुने पीडालाई बेसार सेवनले केही हदसम्म कम गर्छ।
अनिद्राको समस्या हटाउन पनि बेसार उपयोगी मानिन्छ। बेसार मिसाइएको दूधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निद्रा लगाउँछ।
वजन घटाउन पनि बेसारको प्रयोग निकै उपयोगी मानिन्छ।
बेसारको नियमित प्रयोग छालाको लागि फाइदाजनक छ। यसले छाला चम्किलो बनाउन र बुढ्यौलीलाई धकेल्ने काम गर्छ। त्यसैले सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्रीको बेसारको प्रयोग हुन्छ।
बेसारले मानसिक चिन्ताको शिकार हुनबाट जोगाउनुको साथै स्मरण शक्ति पनि वृद्धि गर्छ।
बेसार र दूधको मिश्रणमा क्याल्सियम पाइन्छ। जसले हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
महिनावारीमा हुने पीडा कम गर्न पनि बेसारको प्रयोग उपयोगी हुन्छ।
Don't Miss it वास्तुशास्त्र अनुसार यी कामहरु गरेमा मिल्नेछ सफलता
Up Next करियरलाइ सफल बनाउने प्रेरक भनाईहरु
घरमा यस्ता संकेत देखिए, हुदैछ लक्ष्मीको साथै धनको बास
3 months ago 2068 Views
3 months ago 866 Views
सरकारी क्षेत्रमा सफल हुन्छन् यी राशि भएका व्यक्तिहरु
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका व्यक्तिले लगाउनुहँदैन सुन
3 months ago 2001 Views
वास्तुशास्त्र अनुसार यी कामहरु गरेमा मिल्नेछ सफलता
3 months ago 305 Views